thinzar's blog: လေ့လာမိသော မလေးလူမျိုးများဧ။် ရိုးရာဓလေ့ အမူအကျင့်များ
လေ့လာမိသော မလေးလူမျိုးများဧ။် ရိုးရာဓလေ့ အမူအကျင့်များ
မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မလေး၊ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ တာမီလ် လူမျိုးတွေ အဓိက နေထိုင်တဲ့အတွက် ရိုးရာဓလေ့တော်တော်များများမှာ ဒီလူမျိုးစု သုံးခုလုံးရဲ့ ဓလေ့တွေ ထင်ဟပ်နေတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့လူမျိုးတွေဟာ တစ်ခါတစ်လေတော့ အင်မတန် မုန်းစရာကောင်းပေမယ့် တစ်ချို့ရိုးရာ ဓလေ့တွေကတော့ အားကျ အတုယူစရာ ကောင်းပါတယ်။ မလေးလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဆိုတဲ့အခါ အများအားဖြင့် မလေးမွတ်စလင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဓလေ့တွေဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ကတော့ လူမျိုးဘာသာမရွေး မလေးရှားနိုင်ငံသားတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ ဓလေ့စရိုက်တွေပါ။
နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ လက် နှစ်ဘက်လုံးကို သုံးပါတယ်။ တစ်ခြားသူနဲ့ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပြီးရင် လက်ကို ရင်ဘတ်မှာ ကပ်လိုက်တယ်။ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ နှုတ်ဆက်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောတဲ့။ ကလေးလေးတွေက လူကြီးတွေရဲ့လက်ကို နမ်းပြီး နှုတ်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။ မလေးလူမျိုးတွေရဲ့ ချစ်စရာ ဓလေ့တစ်မျိုးပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေက လွဲရင် ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်လေ့ မရှိပါဘူး။
အများအားဖြင့် မလေးလူမျိုးတွေဟာ ထမင်းစားရင် လက်နဲ့ စားကြပါတယ်။ အိမ်မှာတင် မဟုတ်ဘဲ မင်္ဂလာဆောင်မျိုး အခမ်းအနားကြီးတွေမှာပါမကျန် လက်နဲ့ စားပါတယ်။ ပြီးရင် မြန်မာပြည်မှာလို ဧည့်သည်ကို ဒါစားပါ ဟိုဟာစားပါဆိုပြီး ပြောလေ့ မရှိပါဘူး။ ဒါစားမလား ဒါယူမလားလို့ဘဲ မေးကြတယ်။ ကိုယ်က အားနာနေရင်တော့ ငတ်မှာသေချာတယ်။ အစကတော့ မသိဘူး။ အဲဒီလိုမေးတာ ဒီအတိုင်း ဝတ်ကျေ တန်းကျေ သဘောလောက် မေးတယ်လို့ဘဲ ထင်ထားတာ။ နောက်မှ သူတို့တွေကိုက အဲလိုဘဲ ပြောတတ်တယ်ဆိုတာ သိလာတယ်။ အုန်းသီး အရမ်းပေါတဲ့နိုင်ငံမို့လားတော့ မသိ အုန်းနို့ အရမ်းစားကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဟင်းတွေမှာ အုန်းနို့မပါတာ ရှားတယ်။ ပဲပင်ပေါက်တောင် အုန်းနို့နဲ့ ကြော်တာတွေ့ရင် သဉ္ဖာပြောတာ မလွန်ဘူးဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ curry ဆိုရင်တော့ ပြီးရောဘဲ။ သူတို့ဆီမှာက အုန်းနို့မပါရင် ဟင်းအနှစ် ဖြစ်အောင် ချက်လို့ မရဘူးလို့ ခံယူထားတာ။ မနက်စာကိုလည်း Nasi lamek လို့ခေါ်တဲ့ အုန်းထမင်းကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် စားနိုင်ကြတာ အံ့ဩမိတယ်။
မလေးလူမျိုးတွေရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အကြောင်းပါ။ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ လာတက်တဲ့သူတွေကို ပန်းတစ်ပွင့်မှာ ကြက်ဥပြုတ်တစ်လုံးတွဲချည်ထားတာ လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးပါတယ်။ Bunga Telur လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံပိုပြီး တတ်နိုင်တဲ့သူကတော့ လှတပတ ဘူးလေးတွေ(Egg holder) ထဲမှာ ကြက်ဥပြုတ် ထည့်ပြီး ပေးကြတယ်။ ဘူးရဲ့ ကွာလတီကနေ အဲဒီ မိသားစုရဲ့ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကို သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့် ပြတယ်လို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီကြက်ဥပြုတ်လည်း နောက်ပိုင်း ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင်တွေရဲ့ ဓားစာခံ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာသလိုပါဘဲ။
တောရွာမှာနေ မြို့တက် အလုပ်လုပ်၊ ကျောင်းတက်ကြတာ များတယ်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးက ကောင်းတော့ အလုပ်ပိတ် ကျောင်းပိတ်ရင် ရွာပြန်ကြတယ်။ balik kampung ပေါ့။ အခုလာမယ့် အစ်နေ့ (Hari raya) လိုမျိုးဆိုရင် လူတော်တော်များများ ရွာပြန်ကြလို့ highway တွေ အကုန် jam ဖြစ်ပြီး ကွာလာလမ်ပူမြို့ထဲမှာ ပြိုင်ကားမောင်းတဲ့ speed နဲ့ မောင်လို့ရလောက်အောင် လူရှင်းနေတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ရွာတွေ တည်ထားတဲ့ ပုံက စနစ်တကျ မရှိဘူး။ မြေတွေ့ရင် အိမ်ဆောက်များ လုပ်ကြသလား မသိဘူး။ တစ်အိမ်နဲ့ တစ်အိမ် တော်တော် လှမ်းတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုဘဲ မလေးရှားနိုင်ငံဟာ လူမျိုးစုကြီး သုံးခု အဓိက နေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုံးပိတ်ရက် အင်မတန် များပါတယ်။ ကမာ္ဘပေါ်မှာ ရုံးပိတ်ရက် အများဆုံးနိုင်ငံ လို့တောင် ပြောလို့ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကမာ္ဘပေါ်မှာ public holiday လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေ့၊ နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ တွေအပြင် အစ္စလာမ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ ဘာသာ အားလုံးရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်တွေမှာ ရုံးပိတ်ပါတယ်။ အစ်နေ့၊ အစ္စလာမ် နှစ်သစ်ကူး၊ wesak day (ကဆုန်လပြည့်နေ့ ထင်တာဘဲ)၊ ဒေဝါလီနေ့၊ တိုင်ပူဆန်၊ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး၊ ခရစ်စမတ် စသဖြင့် အများကြီးပါဘဲ။ ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေရဲ့ ဘုရင် မွေးနေ့တို့ ပြည်နယ် အထိမ်းအမှတ်နေ့တို့လဲ ပိတ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် နိုဝင်ဘာနဲ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ကြားမှာ အများဆုံးပါဘဲ။ ကျောင်းတက်တုန်းကဆို အဲဒီအချိန်ဆို Semester II ပေါ့။ ကျောင်းချည်း ပိတ်နေတာနဲ့ တစ်ခါတစ်လေ စာသင်လို့တောင် မပြီးဘူး။ ပျမ်းမျှ တစ်ပါတ်မှာ ပိတ်ရက် တစ်ရက်လောက်ကို ရှိတာ။ တနလာင်္ကနေ သောကြာ အပြည့် တက်ရတဲ့ အပါတ်တွေက အရမ်းကို နည်းလွန်းတယ်။ ဒီလို ရုံးပိတ်ရက်များတဲ့ နိုင်ငံပါ။ အဲဒီလို ရုံးပိတ်ရက် များတဲ့အပြင် ဥပမာ public holiday က စနေ ဒါမှမဟုတ် တနင်္ဂနွေမှာ ကျတယ်ဆိုရင် နောက်အပါတ် တနင်္လာပါ ဆက်ပြီး ပိတ်ပေးတာ ထုံးစံပါ။ holiday အခွင့်အရေးကို လုံးဝအဆုံးရှုံး မခံတဲ့ နိုင်ငံပါ။
အဓိက ရုံးသုံးစကားကတော့ မလေးစကားပေါ့။ မလေးရှားမှာ အဓိကအားဖြင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင် လား..လား..နဲ့ ဆုံးပါတယ်။ I don’t know lah.. Go and see yourself lah.. တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ ပြောရင် မား..မား.. It’s not like that maa.. နဲ့ ဆုံးတယ်။ မလေးရှားကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ စင်ကာပူမှာလည်း အခုထိ အဲဒီအကျင့် ရှိနေကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်လည်း ဒီမှာ နေတာကြာသွားတော့ သူတို့လို အကျင့်ပါကုန်တယ်။
~စဉ်းစားမိသလောက်လေးတွေ ရေးလိုက်တာပါ။ ဆက်ပါဦးမယ်~
သူတို့ထုံးစံလည်း တစ်မျိုးပဲနော်။ ယဉ်တော့ယဉ်ကျေးတယ်။ အစ်နေ့ဆိုလည်း ပျော်စရာကောင်းမှာနော်။ တော်တော်လေးစည်မှာပဲ။ ဒီမှာကတော့ မနက် ဗလီသွားတဲ့အချိန်မှလူတွေ့ရတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဒီလိုပဲ။
ဟုတ်တယ်အစ်မ။ မအားတာနဲ့ ပျောက်နေတာ။ ရမ်ဇာန်ဝင်စတုန်းက ရမ်ဇာန်လအကြောင်းရေးဦးမလို့ပဲ။ အဆက်သဘောနဲ့လေ။ ဘယ်လိုမှမအားတာနဲ့။ မနက်ကျတော့လည်း မနက်မလို့။ ညကျတော့ ညမလို့နဲ့။ အိပ်နေတာကိုပြောတာ။ :P ။ ကျောင်းကလည်း တစ်နေကုန်ဆိုတော့လေ။ အဲဒါနဲ့ အခုမှတင်ဖြစ်တာ။ နောက်ကျမှပြောလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အစ်နေ့ကျရင် အစ်တီးရရင် တော်ပြီ။ ပေးမယ်မလား။ :P
26/9/08 10:36 PM
di post kaayan kaung dar pae laa. :)
27/9/08 10:57 AM
ဗဟုသုတတွေ တထောကြီးရ သွားပါတယ်။ ဆက်မျှော်နေမယ်။
27/9/08 11:23 AM
ဟုတ်တယ် အမရေ ကျွန်တော် uni cantern သွားရင်
အုန်းနို ့နဲ ့ပဲ နှစ်ပါးသွားရတယ်....ကျွန်တော်က malaysia ကပါပဲ...UTP(petronas) ကပါ။
28/9/08 4:37 PM
winkabar>> အင်း.. အာရှတိုက်သားတွေက ယဉ်ကျေးကြပါတယ်။ အစ်နေ့လား.. ဘယ်ကလာ စည်မလဲ။ အားလုံးက အစ်နေ့ဆို ရွာပြန်ကြတာလေ။ ကွာလာလမ်ပူမှာ သရဲတောင် ခြောက်နိုင်တယ်။ ခြောက်ကပ်နေတာဘဲ။ ကားလမ်းတွေလဲ ရှင်းနေတာ။ စာတွေ ဖိကျက်နေလို့ ပျောက်နေတာလား။ ဒီကို လာခဲ့လေ။ အစ်ဒီးလည်း ပေးမယ် မုန့်လည်း ကျွေးမယ် :)
မkom>> ဟုတ်.. ဆက်ရေးပါမယ် အစ်မ။ လာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစ်မလည်း သတိရရင် ထပ်ဖြည့်ပေးလေနော်။
ဖြိုးဝေတိုး>> uni canteen ကတော့ ပြောမနေနဲ့။ သေချင်စိတ်တောင် ပေါက်တယ်။ အစ်မတော့ ကြက်သားကြော်နဲ့ ငါးကြော်ကို တစ်လှည့်စီစားရင်း ကျောင်းလေးနှစ် ပြီးသွားတာဘဲ။ အုန်းနို့ဆို ဝေးဝေးရှောင်တယ်။ :D UTP ကလား။ အစ်မ အဲဒီကျောင်းကို တစ်ခါ ရောက်ဖူးတယ်။ ၂၀၀၆ တုန်းက။ UTP မှာ convocation နဲ့ cultural exhibition ပေါင်းလုပ်နေတယ်လေ။ မြန်မာကျောင်းသားတွေ ကရင် အက ကတာတောင် ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။
29/9/08 10:36 AM
ayan kaung thaw post ta khu bar...
malay ne`. pat thet p thi dar dway amyar gyi shi par dae...
nauk ma advise pay mae lay naw...
5/10/08 10:13 PM
Harun>> ti dar dwayamyar gyi shi yin ta khar tae pyaw twa dar ma hote bu.. naut post ta khu pho' kong gyan shar sa yar ma lo dot aung lay. :-)
6/10/08 10:04 AM